जिसस क्राईष्टको जन्म खासमा कहिले भएको हो ? – Shuva News
जिसस क्राईष्टको जन्म खासमा कहिले भएको हो ?
Shuvanews १० पुष २०७५, मंगलवार January 1, 2019 475 Views
क्रिसमसका अधिकांश परम्पराको मुल गैरक्रिश्चियन रहेको छ । क्रिसमस मनाउँदा प्रयोग गरिने धेरै परम्पराको सम्बन्ध जिससको जन्मसँग भन्दा पनि क्रिश्चियन धर्म युरोप पुग्नु अघि युरोपमा कायम रहेका विभिन्न पर्वसँग रहेको छ ।
क्रिसमसको वास्तविक मुल खोज्ने हो भने २००० वर्ष पहिलेको रोमनहरुले मनाउने एक चाड र उत्तरी युरोपमा लोकप्रिय ‘युल’ पर्वमा ध्यान दिनुपर्छ । रोमन साम्राज्यमा डिसेम्बरमा खेतीपाती सकिएको खुसीयालीयामा ‘सेटेनेलिया’ चाड मनाइन्थ्यो ।
के जिसस क्राइस्टको जन्म डिसेम्बर २५ मानै भएको थियो ?
यही कारणले शुद्धतावादी प्युरिटनहरुको उल्लेख्य संख्या रहेको अमेरिकी राज्य म्यासाच्युसेटमा क्रिसमसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । साथमा म्यासाचुसेटका छिमेकमा रहेका ६ अन्य अमेरिकी राज्यको उलेख्य भूभागमा क्रिसमसलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।
सन् १६५९ देखि १६८१ बीचमा म्यासाचुसेटमा क्रिसमसको बेला यसका कुनै पनि संकेतको प्रयोग गरेमा ५ सिलिङ जरिवाना तिराइन्थ्यो । यो रकम भनेको तत्कालिन समयमा एक श्रमिकको एक हप्ताको कमाई हुन्थ्यो । यो कुराले गर्दा अमेरिकामा क्रिसमस निक्कै अलोकप्रिय भयो । अमेरिकाको संघीय सरकारले सन् १८७० मा क्रिसमसलाई राष्ट्रिय पर्व घोषणा नगरेसम्म यो व्यवस्था कायम थियो ।